Sidee loo kala soocayaa hore iyo gadaasha maaskaarka | DEYI
Maaskaro ayaa loo baahan yahay wakhti kasta inta lagu jiro cudurka faafa, markaa sidee baad u kala soocdaa hore iyo gadaal ee waji xidhka iyo waji-bixinnada cad ee la tuuri karo? Marka xigta waxaan ku tusayaa jaleec
Kala sooc inta u dhexeysa hore iyo gadaasha waji-xidhka (1) Marka laga eego dhinaca midabka, dhinaca mugdiga ah guud ahaan waa qeybta hore ee maaskaro, taas oo ah, dhinaca kasoo baxa marka ay xiran tahay. (2) Ka xallinta maaskaro maaddada, dhinaca jilicsan guud ahaan waa wejiga maaskarada maxaa yeelay waa inay ku dhowdahay maqaarka. Dhinacyada qallafsan waa dhinaca dambe ee maaskaro, waana in ay banaanka hore u soo noqotaa markii la gashado. (3) Marka la kala saarayo kareemada maaskarada, guud ahaan kareemada ayaa ah maaskaro ka baxsan, dhinaca ka soo horjeeddaina waa gudaha maaskaro-gashiga.
2. Maaskaro cad-cad xagga hore iyo gadaal
(1) Maaskaro LOGO: Marka hore eeg masaska LOGO. Guud ahaan marka lagu hadlo, maaskaro LOGO waxaa lagu daabici doonaa banaanka maaskaarka, ka dibna waad xiran kartaa adigoo raacaya jihada saxda ah ee xarfaha LOGO.
(2) Maqaar bir ah oo maaskaro ah: Haddii uusan lahayn LOGO maaskaro, waxaa lagu kala saari karaa xargaha birta. Guud ahaan marka lagu hadlo, meesha ay ka sameysan tahay xargaha birta ku jira, lakabka keliya ayaa u muuqda banaanka halka lakabka lakabka ahna uu gudaha u jeedaa. Waxaa sidoo kale si toos ah loogu xukumi karaa sinnaan la'aanta xarigga birta. Dhinaca ugu badan ee looxyada xargaha birta guud ahaan waa lakabka dibedda, dhinaca fiicana waa lakabka gudaha.
(3) Maqaarka Maska: Ugu dambeyntii, wejiga hore iyo kan dambe ee maaskaroda waxaa lagu xukumayaa kareemada maaskaro. Si kastaba ha noqotee, qaabkani malaha tixraac xoog leh, sababtoo ah maaskaro ay soo saarteen soo saareyaal kala duwan ayaa leh jihooyin kala duwan. Laakiin xaaladaha badankood, wajiga maaskaro-hoos u laabiddu waa dhinaca hore, taasi waa, dhinaca ka soo jeeda dhinaca kore.